Zec yakagona: ‘Mavheti’ | Kwayedza
Zec yakagona: ‘Mavheti’
03 Aug, 2018 - 00:08	 2018-08-02T14:10:14+00:00 2018-08-03T00:01:20+00:00 0 Views
VAMWE verudzi rwechichena vanotenda nemafambisirwo akaitwa sarudzo nekomisheni inoona nezvesarudzo munyika, yeZimbabwe Electoral Commission (ZEC).
Kwayedza svondo rino yakaita hurukuro nevamwe vechichena avo vakapa mafungiro avo pamusoro pesarudzo idzi.
VaCuerden Mick (83) vanoti vakafadzwa nemafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC.
“Ndave nemakore ndichivhota kubvira mugore ra1953. Ndakashanda muhurumende yeRhodesian mugore ra1963 sadistrict administrator – returning officer kuEastern Highlands. Ndiri kufara nekutenda nekurongeka kwakaita sarudzo dzenyika ino,” vanodaro VaMick. Muzvare Maureen Moit (54), vanove mugari wekuHelensvale, vanoti vari kugutsikana nemafambirwo akaitwa sarudzo idzi.
“Semaonero angu, vana veZimbabwe vave kuratidza kukura pane zvematongerwo enyika kudarika mamwe makore. Kava kechipiri ndichivhota, zvakare ndaona kubatana kwaita vana veZimbabwe – ungave muchena kana munhu mutema,” vanodaro.
Zvichakadai, kune vamwe vakaendawo vachida kunovhota asi ndokutadza nekuda kwezvikonzero zvakasiyana.
Muzvinabhizimusi mukuru, Mai Tracy Hunter, mumwe wevakatadza kuvhota nekuda kwekuti zita ravo harina kuonekwa mumagwaro ekuvhota (voters roll).
“Ndiri mugari mukuru weZimbabwe asi ndinorwadziwa zvakanyanya kuti handina kuvhota gore rino. Ndave nemazuva ndadzoka kubva kunze kwenyika saka ndakasvika vatovhara kunyoresa kuti munhu avhote.
“Ndauyawo kuti ndizozama nechitupa changu chekufambisa kuti zvimwe ndingavhote asi ndaudzwa kuti ndakatononoka. Zvandibata mwoyo asi hapana chekuita nekuti mhosva ndeyangu,” vanodaro Mai Hunter.
Musikana wechidiki Angelina Corzette (18) anoti akafara nekuvhota kwaakaita kekutanga muupenyu hwake. “Chiitiko ichi chaidakadza, ndaita kunge mwana wamambo mabatirwo acho andakaitwa nevashandi vekuZEC. Ndakanoratidza shamwari dzangu chigunwe changu mushure mekubva kunovhota. Dzimwe shamwari dzangu hadzina kuenda nekuti dzaiti ndezvevakuru chete chete,” anodaro.